बलात्कार: पीडित नै विस्थापित |
बलात्कार: पीडित नै विस्थापित
प्रकाशित मिति :2017-04-15 10:00:01
विभेदकारी सामाजिक संरचना, महिलाका लागि असहयोगी न्याय प्रणाली, अन्य अपराध र बलात्कारलाई समान तहको कसुर ठान्ने प्रहरी मानसिकताजस्ता कारणले अहिले पनि बलात्कारपीडित महिलाले न्याय पाउँदैनन् । परिणाम पीडक होइन पीडितले गाउँघरबाट विस्थापित हुनुपर्छ ।
बुटवल । दुई वर्षअघि सिद्धार्थनगरकी एक बालिका आफ्नै बाबुबाट बलात्कारमा परिन् । बलात्कारमा परेकी १२ वर्षे छोरीको पक्षमा आमाले न्याय खोजिन् । आमाकै उजुरीमा बाबु अहिले जेल सजाय भोग्दै छन् । बालिकाले कानुनी न्याय पाइन् । तर, पारिवारिक रूपमा भने झन् ठूलो अन्याय भोग्नुपर्यो । आफ्नै बाबुलाई फसाएको भन्दै घरपरिवारका अरू सदस्य र आफन्तले बालिकालाई धम्क्याए । सबै आफन्त मिलेर घरपरिवारबाटै बहिष्कार गरे । आफू नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि न्यायका लागि साथ दिएकी आमाले पनि छोरीको साथ छोडिन् । सट्टामा विद्यालय पढ्दै गरेकी किशोरीलाई पढ्न छुटाइन् र घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपालगञ्ज पठाइन् । जहाँ उनी ६ जनाको चुलोचौको गरेर बसेकी छिन् । आमा गोमा भन्छिन्, ‘छोरीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । तर, न्यायका लागि घरभित्रै लड्न सकिनँ ।’
तीन वर्षअघि बलात्कारमा परेर गर्भवती बनेकी सालझण्डीकी किशोरी पनि घरपरिवारबाट विस्थापित छिन् । उनी अहिले राजधानीमा घरेलु श्रमिकको काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी छिन् । उनी १४ वर्षे किशोरी साथीका बाबुबाट बलात्कारमा परेकी थिइन् । बलात्कारको पोल खुलेपछि आरोपित पक्राउ परे । आरोपितको परिवार र नातेदार भने किशोरीमाथि जाइलागे । किशोरीलाई गाउँनिकाला नगरे उनको परिवारलाई नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिए ।
धम्की खप्न नसकेपछि घरपरिवारले तत्काल किशोरीलाई ओरेकको बुटवल कार्यालयमा जिम्मा लगायो । करिब पाँच महिना पुनस्र्थापना गृहमा बसेपछि उनी गाउँ फर्किन् । किशोरीलाई गाउँलेले स्वीकार गरेनन् । आफन्तले समेतले तिरस्कार गर्न थाले । गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्था भएपछि अभिभावकले घरेलु श्रमिकको रूपमा राजधानी पठाएका हुन् । ती किशोरी भन्छिन्, ‘ममीहरूसित कुरा त हुन्छ । तर अझै गाउँ गएकी छैन । डर लाग्छ ।’
४ वर्षअघि छिमेकीबाट बलात्कारमा परेर गर्भवती बनेकी थिइन् मोतीपुरकी एक किशोरी । आरोपित अहिले जेलमा छन् । पीडित किशोरी घरपरिवारमा स्थापित भने हुन सकिनन् । लुम्बिनीमा होटेल मजदुरको काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी छिन् । आफन्तका अनुसार किशोरी गाउँलेबाट तिरस्कृत भएपछि सुरुका ६ महिना बुटवलमा रहेको पुनस्र्थापना गृहमा बसिन् । यसैबेला अधिकारकर्मीको पहलमा उनको ७ महिनाको गर्भ काठमाडौंमा जटिल प्रक्रियाबाट फालियो । यसपछि पढ्ने मनसायका साथ उनी घर फर्किन् । किशोरी घर फर्केपछि बलात्कार आरोपीका परिवार र छिमेकले उनी र उनका परिवारमाथि ज्यान लिने धम्की दिए । डराएर उनको परिवार झन्डै एक वर्ष बुटवलको सुकुम्बासी टोलमा आएर बस्यो । विधवा आमाले होटेलमा मजदुरी गरेर दुई भाइ र उनलाई पढाउँदै थिइन् । तिनै आमा पनि बिरामी परेपछि दुःखका दिन सुरु भए । घर जाने अवस्था नभएपछि एक वर्षयता किशोरीले होटेल मजदुरीको काम गरिरहेकी छिन् ।
बलात्कारपछि विस्थापित हुनेमा महिलाभन्दा बालिका बढी छन् । अधिकारकर्मी नम्रता पोखरेल लोभ र डरका कारण बालिका बलात्कारमा पर्ने, तर तत्काल बताउन नसक्ने भएकाले पनि यस्तो भएको बताउँछिन् । ‘पितृसत्तात्मक सोचका कारण समाजमा पुरुषलाई जे गरे पनि छुट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनमा पनि पुरुषको पुरुषार्थ र महिलाको कमजोरी वा चरित्रसँग जोडेर हेरिन्छ । महिलालाई नै दोष लगाउने प्रचलनले पनि पीडित विस्थापित हुनुपरेको हो ।’
अदालतको लम्बेतान प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय पीडक उम्केका छन् । अनुसन्धानमा खट्ने प्रहरीका अनुसार बलात्कारका घटनामा धेरैजसो आफन्त पीडक हुने भएकाले पनि न्याय र सुरक्षामा आफन्त नै विपक्षमा उभिने गरेका छन् । आफन्तले नै प्रमाण लुकाइदिँदा पीडकहरू सजिलै उम्किएका छन् । यसले गर्दा बलात्कारमा परेका धेरैको न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुने र पीडित विस्थापित हुने गरेका छन् । ‘पीडितलाई ‘होस्टायल’ गर्ने, पीडित र साक्षीले बयान फेर्ने, प्रमाण फेर्ने कारणले पनि बलात्कारका घटनामा सहज न्याय पाएका छैनन् ।’ रुपन्देही प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘यसले प्रहरीमाथि पनि समस्या निम्त्याएको छ ।’
अदालतले फैसला सुनाएका र क्षतिपूर्तिको आदेश गरेका घटनामा समेत बलात्कारपीडित विस्थापित भएका छन् । यसले गर्दा न्याय र राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसको उदाहरण हुन्– सामूहिक बलात्कारमा परेकी नवलपरासीको सुनवलकी २२ वर्षे युवती । ४ वर्षअघि अर्थात् ०६९ वैशाखमा रूपन्देहीको केरवानीमा उनी बलात्कृत भइन् । युवतीको मुद्दामा रूपन्देही अदालतले सोही असार पहिलो साता फैसला सुनायो । बलात्कारमा संलग्न चारजनालाई १० वर्ष जेल सजाय र युवतीलाई दुई लाख क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने आदेश भयो । पीडकले सजाय भोगे । युवतीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भने अझै पाएकी छैनन् । घटनापछि उनको घरपरिवारसमेत त्यहाँबाट बसाइँ सरेको छ । बलात्कारको उजुरी फिर्ता नलिएकोमा धेरै छिमेकीले मुख बारेपछि घरबार नै बेचेर अर्को गाउँ सरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा रूपन्देहीमा पछिल्ला साढे ५ वर्षमा २ सय ३६ महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् । त्यसमा १४ वर्षमुनिका १ सय २१ बालिका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४४ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा २८ जना बलात्कार र १६ वटा बलात्कार प्रयासका हुन् । १६ वर्षमुनिका बालिका १६ जना छन् ।
बलात्कारमा परेका आधाजसो महिला तथा बालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने गरेका छन् । प्रजनन अङ्गको विकास नभएका कारण अधिकांश बालिका शारीरिक समस्या समेत भोग्न बाध्य छन् । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. श्रीधर आचार्य प्रजनन अङ्गको विकास नहुँदै सम्पर्क हुँदा उनीहरूमा तत्काल मात्र होइन दीर्घकालसम्म पनि समस्या देखिने बताउँछन् ।
बलात्कारमा परेका महिला तथा बालबालिकालाई स्थापित गर्न के गर्नुपर्ला ? समाजशास्त्रका प्राध्यापक मीनप्रसाद भुसालले कानुनभन्दा बलियो समाज हुने भएकाले सामाजिक अगुवाहरूले नै पीडकलाई विस्थापित र पीडितलाई स्थापित गर्ने काम थाल्नुपर्र्ने बताए । ‘पहिलो चरणमा राज्यतहबाटै सोधीखोजी गरेर पीडितलाई घरपरिवारमा स्थापित गर्न अभियान चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसपछि भने सामाजिक अगुवालाई जिम्मा लगाउनुपर्छ ।’
(अमृता, रूपन्देहीमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।)